Tsy fanamboarana fotodrafitrasa maro : 504 miliara Ar isan-taona ny fatiantoka eto Madagasikara | NewsMada
Tsy fanamboarana fotodrafitrasa maro : 504 miliara Ar isan-taona ny fatiantoka eto Madagasikara
Misy ny ezaka ataon’ny minisiteran’ny Asa vaventy amin’izao fotoana izao, manao ireo fikojakojana ny lalam-pirenena. Ny olana anefa, tsy hita firy miaraka amin’izany ny ho an’ny sehatra hafa, toy ny fambolena, herinaratra … Olana iray hafa, miankina betsaka amin’ny famatsiam-bola avy any ivelany ireny tetikasa ireny.
Efa antitra sy simba avokoa ny ankamaroan’ny fotodrafitrasa eto an-toerana. Na misy aza ny fanamboaran-dalana, betsaka tsy tambo isaina ny olana any amin’ny distrika sy faritra. Miankina tanteraka amin’ny fisian-dalana, ohatra, ny fitaterana, singa iray iankinan’ny fampandrosoana. Ny faharatsian-dalana, misy fiantraikany any amin’ny fambolena, sakana ho an’ny fampandrosoana ny toekarena manontolo mihitsy. Mbola hafa ny tsy fahampian’ny famatsiana herinaratra, tohodrano, fitarihan-drano fisotro na manondraka velaran-tany, seranan-tsambo, hopitaly, sns.
Araka ny tarehimarika navoakan’ny Banky afrikanina momba ny fampandrosoana (Bad), fatiantoka 135 miliara Ar isan-taona ho an’i Madagasikara ny tsy fanamboaran-dalana ; tafakatra 504 miliara Ar isan-taona izany raha miampy ireo fotodrafitrasa lehibe hafa, toy ny famatsiana herinaratra sy ny sehatra hafa. Vao mainka mitombo hatrany io fatiantoka io amin’izao fotoana izao.
Fatiantoka goavana izany, satria tsy voavoly ny velaran-tany tokony hamokatra maherin’ny 40 %. Mifandray amin’izany, ny tokony hanamboaran-dalana, tsy mahakasika ny lalam-pirenena ihany fa indrindra koa ny mampifandray ireo distrika sy kaominina samihafa. Mbola mifandray amin’izany koa ny famatsiana herinaratra. Ny hita anefa ankehitriny, tsy misy afa-tsy 5 % monja ny tany voavoly eto. Raha ampitahana amin’ny samy firenena afrikanina, mifanalavitra amin’ny zava-misy any Ouganda na Mozambika ny eto Madagasikara.